WARBIXIN: Xog Xiiso Leh Oo Aad Uga Baahantahay Kulankii Ay Real Madrid Ugu Soo Baxday Finalka Champions League – Kooxda.com
Home 2018 May Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Xog Xiiso Leh Oo Aad Uga Baahantahay Kulankii Ay Real Madrid Ugu Soo Baxday Finalka Champions League
WARBIXIN: Xog Xiiso Leh Oo Aad Uga Baahantahay Kulankii Ay Real Madrid Ugu Soo Baxday Finalka Champions League
May 2, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Real Madrid ayaa iska xaadirisay Finalka champions League kadib bar-baro 2/2 ah oo ay la gashay kooxda Bayern Munich kulan ka tirsanaa Lugta 2-aad ee semi-finalka champions League.
Goolal uu dhaliyay Karim Benzema ayaa Los Blancos ka caawiyay in ay Iska xaadiriso finalka tartanka champions League ee ay boqorada ka tahay.
Hadaba waxa aan halkan ku soo gudbin doonaa xogta laga diwaan galiyay kulankii xiisaha lahaa ee xalay.
1.Cristiano Ronaldo ayaa ciyaaray kulankii 152-aad ee tartanka champions League waana xiddiga ugu safashada badan taariikhda tartanka isaga oo hal gool dheer Xavi.
2.Cristiano Ronaldo ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan wareegyada sida tooska loo haro tartanka champions League 5-tii xilli ciyaareed ee ugu dambaysay.
Cristiano Ronaldo: 35 gool
Thomas Muller: 12
3.Goolkii bar-baraha e uu dhaliyay Karim Benzema ayay ka horeeyeen 28 baas oo dhamaystiran oo ay isku dhiib-dhiibeen xiddigaha Real Madrid kaliya goolkii Lucas Digne ee uu Barcelona u dhaliyay kulankii Olympiakos oo 29 baas ahaa ayaa ka badan tartanka xilli ciyaareedkan.
4.Xiddiga reer France ee Karim Benzema ayaa ka mid noqday 5-ta xiddig ee ugu goolasha badan taariikhda tartanka champions League
Cristiano Ronaldo 120 gool
5.Kooxda Bayern Munich ayaa ku fashilantay in ay shabaqeeda ilaashato 14-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay champions League ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda waana rikoorka ugu dheer eer taariikhda tartanka.
6.Xiddiga James Rodríguez ayaa ah xiddigii 7-aad ee Taariikhda champions League Kooxda Real Madrid u dhaliya kana dhaliya waxana sidaas sameeyay Beckham, Morata, van Nistelrooy, Morientes, Robben & Zamorano.
7.Kooxda Real Madrid ayaa gaartay Finalkeedii 16-aad ee tartanka European Cup/Champions League waana kooxda ugu badan ee sidaas samaysay.
8.Tababare Zinedine Zidane ayaa ah tababarihii ugu horeeyay ee gaara Finalk champions League 3 jeer oo xiriir ah tan ilaa Marcello Lippi intii u dhexaysay 1996 & 1998.
9.Intii uu Zidane hogaaminaya Kooxda Real Madrid ayaan marna laga reebin wareegyada tooska loo haro ee tartanka iyaga oo gudbay dhamaan 9-kii labada lugood ee champions League sidoo kale badiyay labadii final ee ay ka soo muuqdeen.
10.Keylor Navas ayaa sameeyay 8 badbaadin kulankii Bayern Munich waana rikoorkiisa badbaadinta ee ugu dheer ee wareegyada tooska loo haro.
11.Sergio Ramos ayaa sameeyay 6 Nadiifin qaybtii hore ee ciyaarta waxana uu ka badnaa dhamaan intii ay sameeyeen xiddigaha Bayern oo la isku daro.